Yemazuvano Alternatives kune Classic Linux Commands | Linux Addicts
Pano unogona kuona zvimwe nzira dzemazuva ano kune dzekirasi Linux mirairo. Izvi hazvirevi kuti ivo vari nani kana kuipa, kana kuti unofanira kushandisa imwe kana imwe. Shandisa iyo inoita seyakanyanya kugadzikana kwauri sezvandinogara ndichitaura. Nekudaro, vamwe vashandisi vangave vasingazive nezve dzimwe nzira idzi uye vangazviona sezviri nani sarudzo.
Zvirongwa zvakanakisa zvaunogona kushandisa mune yako GNU/Linux distro, uye zvinogona kudaro maturusi makuru evatariri yehurongwa ndeiyi:
1 neovim vs vim
2 tldr vs murume
3 duf vs df
4 exa vs ls
5 fd vs kuwana
6 pamusoro vs kumusoro
7 ncdu vs
8 bat vs katsi
9 httpie vs wget uye curl
Iyo yakakurumbira mameseji edhita vim, yakakurukurwa zvakanyanya pakati pevateveri veemacs, nano, nezvimwe, zvakare ine imwe nyowani imwe nzira. Ndezve neovim, iyo yakavakirwa pane zano rekuwedzera kugona kwe vim uye nekuishandura kuita IDE. Kutenda kune iyi purojekiti, mamwe mabasa echimanjemanje, cursor maitiro, nezvimwe zvinowedzerwa.
tldr vs murume
Chimwe chishandiso chinoshandiswa nemunhu wese munhu, murairo wekuratidza bhuku rekushandisa. Zvakanaka, inewo imwe nzira yemazuva ano yakadai se tldr. Uye ndezvekuti mapeji anokandwa nemurume anogona kunge achirema, uye akaoma kunzwisisa kune vamwe vashandisi. Chimiro chayo hachisiwo chakanakisa chekunzwisisa. Naizvozvo, nerubatsiro rwetldr runogona kurerutswa zvakanyanya uye mienzaniso inoshanda yekushandisa inogona kuratidzwa.
duf vs df
Iyo df command zvakare yakakurumbira muLinux kutarisa dhisiki nzvimbo iyo yemahara, yakagarwa, nezvimwe. Naizvo, wow imwe nzira iri nyore yakanyorwa mumutauro weGo programming uye nekumwe kuvandudzwa. Ichakuratidza ruzivo rwuri nyore-kunzwisisa nezve ese akaiswa maturusi, inokutendera iwe kuronga zvinobuda, chengetedza zvakabuda muJSON fomati, nezvimwe.
Pakati pemirairo inoshandiswa zvakanyanya kana uchishandisa terminal ndeye ls, murairo unonyora zviri mukati medhairekitori. Murairo yekare anoita zvakafanana, asi ane kuvandudzwa, anoshandisa mamwe mavara anonzwisisika, kuratidza metadata, hunhu hwakawedzerwa, inode, nhamba yezvivharo zvakagarwa, misi yakasiyana-siyana, hierarchical tree view, yakavakirwa muGit tsigiro yekuona mafaera achinja, nezvimwe.
fd vs kuwana
Kuti uwane chimwe chinhu chokwadi washandisa nzvimbo kana kuwana mirairo. Zvakanaka, iyi yechipiri ine imwe nzira yemazuva ano yekutsvaga. Zita rake ndi fd, yakanyorwa neRust, uye ine chinangwa chekurerutsa tsvakiridzo uye nekukasika kudzoka kwezviwanikwa.
pamusoro vs kumusoro
Iva nechokwadi chokuti unozviziva, nokuti inoshandiswawo zvakanyanya seimwe nzira yepamusoro. Ndezve htop, vhezheni yekuratidza ruzivo rwemaitiro, mashandisirwo ezviwanikwa, nezvimwewo, nenzira inonzwisisika, munguva chaiyo, uye nemukana wekudyidzana.
Ndisati ndataura nezve df command, asi zvirokwazvo wakashandisawo du kutarisa saizi yefaira dhairekitori. Zvakanaka, imwe nzira inonzi ncdu, uye inopa mhedzisiro yakafanana, asi iine ruzivo rwakawanda runokwezva padanho rekuona, ine mifananidzo, yakaodha, uye inopindirana kushandiswa. Iro zita rinobva kunc (ncurses) uye du, ndiko kuti, iri du rakanyorwa muGo uye rinoshandisa raibhurari yakakurumbira yemifananidzo.
bat vs katsi
Iyo concatenator, kana katsi, inobatsira zvakanyanya pakuratidza zviri mukati mameseji mafaera, kana kune mamwe mabasa akasanganiswa nemimwe mirairo uchishandisa mapaipi, nezvimwe. Imwe nzira yemazuva ano ndeye chiremwaremwa. Iyi inowedzera syntax kujekesa, Git kubatanidzwa, paging, nezvimwe.
httpie vs wget uye curl
Mimwe mirairo inoshandiswa zvakanyanya kudhawunirodha kana kuona zvemukati zvewebhu mune terminal ndeye wget uye curl. Maturusi ese ari maviri anoshandiswa zvakanyanya uye akajairika, akaiswa neanogara mune angangoita ese anozivikanwa distros. Nzira yemazuva ano kune zvose inonzi httpie, nekuvandudzwa kwekushandisa zvine hushamwari, nekubuda kwemavara uye kwakarongwa kuti ivandudze kunzwisisa kwayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Mazuvano Alternatives kune Classic Linux Commands
Yakanakisa chinyorwa !!! Ndatenda
Oscar Fernandez-Sierra akadaro
Ini ndinosanganisirawo "ripgrep" (https://github.com/BurntSushi/ripgrep) seimwe nzira ye "grep". Uye "fzf" (https://github.com/junegunn/fzf) inogona kunge iri "pseudo-substitute" ye "shoma" kana "zvimwe" kana iwe uchida kukwanisa kusarudza kubva pane zvabuda, asi zvinoita zvakawanda.
Pindura kuna Oscar Fernandez Sierra
Mushandisi haana basa uye izvo zvinofanirwa kuchinja (Maonero)
Izvi zvakaitika muna Kukadzi. Yangu chiyero che2021 chikamu 3